Dowladda Farmaajo oo weli dagaal kula jirta dowladii hore ee Xasan Sheekh (AKHRISO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Dowladda Farmaajo oo weli dagaal kula jirta dowladii hore ee Xasan Sheekh (AKHRISO)
Dowladda uu hoggaaminaayo madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa haatan u muuqata mid weli dagaal kula jirta dowladii xilka uga horeysay ee uu hoggaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud.
Inta badan macluumaadkii madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo waxqabadkii dowladii uu hoggaaminayay ayaa laga tiray keydadka Online-ka baraha rasmiga ee madaxtooyada Villa Soomaaliya sida muuqalada, sawirrada, war-saxaafeedyada, khudbooyinka qoraalka ah iyo documentiyadii qoraalka ahaa ee waxqabadkii dowladdii hore.
Bogga madaxtooyada Soomaaliya ee www.villasomalia.gov.so oo dib u habeyn lagu sameeyay ayaa laga saaray dhammaan macluumaadkii 4-tii sano ee madaxweynihii hore Xasan Sheekh, iyadoo iminka website-ka madaxtooyada macluumaadka ku keydsan kasoo bilaabanayaa waqtigii uu xafiiska la wareegay madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo.
Website-ka madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa maamula waaxda wafaafinta madaxtooyada, hase yeeshee lama oga sababta rasmiga ah ee loo masaxay maadaama macluumaadka uu yahay mid uu lee yahay Qaranka Soomaaliyeed, islamarkaana waajib tahay in maamul walba oo soo mara madaxtooyada uu xifdiyo.
Wararka qaar ayaa sheegaya in arrintaan uu ka dambeeyo aggaasimaha cusub ee madaxtooyada Fahad Yaasiin Xaaji oo u muuqda inuusan weli ka bogsoon khilaafaadkii siyaasadeed ee hore u dhex maray Faarax Sheekh C/qaadir iyo Xasan Sheekh Maxamuud.
Bogga madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa lagu soo kordhiyay qeyb luqada Carabiga ah, iyadoo horay labo qeyb oo luqadaha Soomaaliga iyo English-ka ay laheyd.
Arrimaha xusida mudan ayaa ah in labo ka mid ah muuqaaladii madaxweynihii hore Xasan Sheekh oo kaliya ay ku hareen bogga, iyadoo weliba muuqaaladaasi aysan caadi uga muuqan ee laga qariyay bogga Youtube-ka, taasoo muujineysa in dhamaan wixii kale ee ku jiray laga tiray, waxaana qeybta muuqaalka ku jira kaliya labo video oo kala ah khudbadii madaxweynihii hore Xasan Sheekh ee furitaankii garoonka diyaaradaha Boosaaso iyo xafladii sanad-guurada labaad ee doorashadii C/weli Gaas ee Garowe.
Sidoo kale, qeybta dhageysiga ee bogga (Audio) ayaa waxaa ku jira wajahda kore illaa afar ciwaan qoraaleed oo marka gudaha loo galo aanay ku jirin qoraalkii oo dhameystiran.
Dhinaca kale, waxaa bogga lagu soo kordhiyay qeyb cusub (Category) oo loogu tala galay madaxweynayaashii hore oo ah meel weli banaan oo aan wali la soo dhigin keydadkii madaxdii hore.
Baraha online-ka ee xafiiska warfaafinta madaxtooyada sida website-ka Villa Somalia, Twitter Villa Somalia oo ah midka ugu caansan Soomaaliya, facebook, iyo baraha kale ee online ka ayaa la abuuray ama la sameeyey xilligii dalka uu madaxweyne ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud, kuwaas oo loo isticmaalayey in farriimaha madaxweynaha lagu gudbiyo laguna keydiyo.